Uyifaka njani ingxelo yokugqibela yeGIMP ku-Ubuntu wethu Ubunlog
Uyifaka njani ingxelo yokugqibela yeGIMP ku-Ubuntu bethu
UJoaquin Garcia | | Imizobo, Ubuntu
Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu luphoswa kukuba ne-Gimp kunikezelo lwenu okanye incasa esemthethweni kwaye abanye bayakuphosa ukuba nohlobo lwamva nje lomhleli womfanekiso.
Inguqulelo yamva nje yalo mhleli wemifanekiso ithandwayo ubandakanya ulungiso lwebug ezimbalwa, iinguqulelo ezintsha kunye nenkxaso yeeplagi ezintsha, inkalo yayo ephucula kakhulu umsebenzi wabasebenzisi bayo abaninzi. Ukuba nohlobo lwamva nje lwe-GIMP kunokwenzeka ukuba ubulele kwizitokhwe zangaphandle.
Ukuze ukwazi faka ingxelo yokugqibela ye-GIMP kwi-Ubuntu okanye kwii-derivativesNokuba ziincasa ezisemthethweni okanye ulwabiwo olusekwe ku-Ubuntu, kufuneka sivule i-terminal kwaye sibhale oku kulandelayo:
Oku kuyakufakela ingxelo yokugqibela ezinzileyo ye-GIMP engu-2.8.20. Ukongeza, le ndawo yokugcina ineplagi eyongezelelweyo eya kuthi iququzelele ukusetyenziswa kwale nkqubo, kuyo yonke i-terminal. Into esebenzayo ngakumbi kwaye ekhawulezayo kunokwenza ngesandla, enye emva kwenye. Kuba ukufaka ezi plugins Kuya kufuneka ubhale oku kulandelayo kwisiphelo sendlela:
Ukuba nangasiphi na isizathu sifuna ukucima indawo yokugcina izinto, kufuneka sivule kuphela i-terminal kwaye sibhale oku kulandelayo:
Emva koku, indawo yokugcina eyongeziweyo iya kususwa kwaye emva koko Ubuntu iya kusebenzisa indawo yokugcina esemthethweni yokufaka kunye nokulawula uhlaziyo lwesi sicelo sidumileyo. Inkqubo njengoko ubona ilula kwaye kulula ukuyenza, kodwa gcina engqondweni ukuba olona hlobo lwangoku lwe I-GIMP ayitshintshi kakhulu isicelo kwaye inokuba yinto yeeveki xa sifumana ezi nguqulelo ngejelo elisemthethweni Ubuntu. Ngayiphi na imeko, ukhetho lolwakho kwaye luya kuxhomekeka kwindlela ofuna ukuyisebenzisa ngayo i-GIMP.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Uyifaka njani ingxelo yokugqibela yeGIMP ku-Ubuntu bethu
Inguqulelo yamva nje, leyo ndiyifakileyo, yi-2.9.5
Ndenze ukuba ezo zinto zigcinwe kunye nohlobo lwe-2.9.5 lwakhutshelwa, hayi u-2.8.20 ... Ngayiphi na imeko i-2.9.5 iziphathe kakuhle, izinzile kakhulu nangona ibiphantsi kophuhliso kunye novavanyo kwaye sele iza nenkxaso yemifanekiso kwi-16 kunye ne-32 bits.
Enkosi indincedile ukususa impazamo:
"Ayiphumelelanga ukuqhuba inkqubo yomntwana" gimp-2.8 "(Ifayile okanye ulawulo alukho)"
Undicela igama eligqithisiweyo lomsebenzisi, kubonakala ngathi akufani nokuvula into enokwenziwa
Phendula ku efehache
Emva kwexesha elide lokuzama, (iminyaka) ndibuyela kwi-GIMP kwaye ndibuthandile ubuso bayo obutsha, ngakumbi iwindow yayo emanyeneyo ngaphandle kokutshintsha nantoni na
Masibone ukuba ndingafunda ukuyenza kuyo le ndiyenzayo kwiAdobe
Yiyo kuphela kwento endifuna ukuyishiya ngokuqinisekileyo le windows
Ndafaka ingxelo yamva nje ngokwenza:
I-sudo add-apt-repository ppa: i-otto-kesselgulasch / gimp
I-sudo ifake i-gimp
Kwaye ngoku andinakuyiqala. Ngaba kuya kufuneka wenze umndululi omtsha?
Iimpawu kwiiphaneli azisebenzi kwaye enye ikuluhlu lweenkqubo ayisebenzi.
apho kuvulwa khona iiterminal: ??
Enkosi ngolu ngeno.
Ndifakele inguqulelo 2.8.22
Ndifuna ukufaka i-BIMP kunye neelaptop ezingaphezulu endizinikayo andikwazi.
Ndifakele i-BIMP kwezinye ii-PC ngaphandle kobunzima kwaye zombini iinguqulelo ezili-10 kunye nama-22 zindinike impazamo xa ndiyidibanisa.
Ungandixelela ukuba uyazi ukuba kutheni.
Isoftware kaMicrosoft Pro 4 eqhuba Ubuntu 16.04 LTS [Ividiyo]
Uyijonga njani imifanekiso ye-panoramic engama-360 ku-Ubuntu ngale plugin